यस्ता पुरुषलाई मन पराउँछन् महिला ! | Kendrabindu Nepal Online News
11572140 537047 4492039 6543054
यस्ता पुरुषलाई मन पराउँछन् महिला !
८ श्रावण २०७६, बुधबार १४:३६
विपरीत लिंगीहरूप्रति आकर्षण हुनु प्राकृतिक कुरा हो । लगभग सबैजसो प्राणीलाई प्रकृतिले यो नियमको परिधीमा बाँधेको छ । तर, जब छनोटको अवसर प्राप्त हुन्छ। विपरीत लिंगीबीचमा पनि कस्तोचाहिँ चाहने भन्ने कुरा हरेकमा फरक हुन्छ । छनोट र रुचि नितान्त व्यक्तिगत कुरा भएकाले सबैलाई एउटै र उस्तै कुरा मन पर्छ नै भन्ने हुँदैन ।
महिला र पुरुषको हकमा पनि यो कुरो लागू हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि अधिकांश व्यक्तिले रुचाउने अर्थात् धेरैजनाको साझा धारणाको मेल खाने विन्दु हुने गर्छ । तसर्थ केही निश्चित स्वभाव, गुण एवं विशेषता भएका व्यक्तिहरू धेरैको रोजाइमा पर्छन् । महलिाहरूको हकमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ ।
सामान्य कदका कतिपय पुरुष पनि सहजै महिलाका प्रिय पात्र बन्न सक्छन् भने हेर्दा खाइलाग्दा भए पनि कतिपयसँग महिलाहरू दूरी कायम राख्न चाहन्छन् । कतिपय पुरुष सदैव आकर्षक महिलाहरूबाट घेरिएका हुन्छन् र आफूसरहका अन्य पुरुषको तुलनामा महिला साथीसँग खुला तरिकाले बाँच्छन् । आखिर त्यस्तो के पाइन्छ उनीहरूमा जसले महिलाहरूलाई आकर्षित गर्छ ? कस्ता पुरुष महिलाहरूका रोजाइमा पर्छन् ?
यस विषयमा थुप्रै सर्वेक्षण भएका छन् । यही क्रममा एक अध्ययन भन्छ–महिलाहरू पुरुषको लुक्सभन्दा व्यवहार हेरेर बढी प्रभावित हुन्छन् । सामान्यतः महिलाहरू यस्ता पुरुषलाई औधि मन पराउँछन् ।
महिलाहरू बुद्धिमान् पुरुषसँग छिटैै प्रभावित हुन्छन् किनभने उनीहरू त्यस्ता पुरुषसँग सबै कुराको जवाफ हुन्छ भन्ने ठान्दछन् । उनीहरू त्यस्ता पुरुषबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइने भएका कारण बढी सन्तोष मान्छन् । बुद्धिमान् पुरुषहरू घन्टौंसम्म झर्को नलाग्ने गरी कुराकानी गर्न सक्छन् जसका कारण महिलाहरूको मन पग्लन्छ ।
बुद्धिमान् पुरुषहरूलाई के थाहा हुन्छ भने सम्बन्ध कायम राख्न बुद्धिमत्ताले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । त्यसैले उनीहरू महिलाहरूसँगको सम्बन्धमा यस्तो खुबी प्रयोग गर्छन् र उनीहरूको मन जित्न सफल हुन्छन् ।
आत्मविश्वासयुक्त पुरुषले अरूका अगाडि फरक एवं विशिष्ट छवि निर्माण गरेका हुन्छन् । उनीहरू न अन्य पुरुषप्रति ईष्र्या गर्छन् न त आफ्ना प्रेमिका वा श्रीमतीमाथि कुनै शंका गर्छन् । उनीहरू सदैव सकारात्मक सोच राख्छन् । महिलाहरू यस्तै पुरुषका पछि लाग्छन् । गुदी कुरा के भने आत्मविश्वासी पुरुषहरू कहिल्यै पनि महिलालाई आफूप्रति आकर्षित गर्नतर्फ लाग्दैनन्, उनीहरू केवल आफ्नो कुरा गर्छन् र अचम्म यहीँ छ कि महिलाहरू पुरुषको यही कुराबाट बढी प्रभावित हुन्छन् ।
कलात्मक व्यक्ति सहज हुन्छन् र उनीहरू हरेकपल जीवन्त जीवन बाँच्छन् । उनीहरू प्रायः महिलालाई प्रभाव तुल्याउन आफ्नो कलात्मकताको प्रयोग गर्छन् र महिलाहरूलाई नै आफ्नो कलाको स्रोत मान्छन् । महिलाहरूले यस्ता कलात्मक सोच भएका पुरुषहरूको प्रशंसा गर्छन् भने साथ रहँदा सहज महसुस गर्छन् ।
विशेष छवि वा भनौं विदेशी बोली–व्यवहारको छनक भएका पुरुषहरूको भाषा एवं शैली पनि अलग हुन्छ । उनीहरू आम मानिसभन्दा फरक एवं विशेष देखिन्छन् । त्यस्ता पुरुषलाई महिलाहरू अनायासै मन पराउन थाल्छन् ।
विचारशील वा ख्याल राख्ने स्वभाव
जसले महिलाका लागि कारको ढोका खोलिदिन्छन्, बस्न कुर्सी अगाडि सारिदिन्छन्, आउटिङमा जाँदा बिल तिर्छन्, घरायसी काममा अघि सर्छन् अनि फाइदा लिने हरेक काममा पहिले सम्मानपूर्वक महिला साथीलाई अग्रसर हुन आग्रह गर्छन् त्यस्ता पुरुष विचारशील पुरुषको श्रेणीमा पर्छन् । आफ्नो व्यवहारमार्फत महिलाहरूप्रति विशेष सम्मान दर्शाउने विचारशील पुरुषलाई महिलाहरू निकै रुचाउँछन् । यस्ता पुरुष हरेक काम गर्नुअघि आफ्नी महिला मित्रले के सोच्ने हुन् भन्ने कुरामा ध्यान पुर्याउँछन्।
रोमान्टिक पुरुषहरू क्लासिकल रोमान्समा बढी विश्वास राख्छन् । उनीहरू महिलालाई चकलेट तथा फूल दिन तथा उनीहरूका साथ क्यान्डल लाइट डिनर गर्न रुचाउँछन् । उनीहरू आफ्ना पार्टनरलाई आफूले दिनमा कतिपटक उनीहरूका बारेमा सोचियो, आफूलाई उनीहरूका के–कस्ता व्यवहार एवं हाउभाउले लोभ्याउँछन्, सबै कुरा बताउँछन् । यस्ता पुरुषलाई पनि महिलाहरू निकैै मन पराउँछन् ।
निर्धक्क एवं विन्दास
महिलाहरू निर्धक्क एवं विन्दास स्वभावका पुरुषलाई सारै मन पराउँछन् । यस्ता पुरुषलाई कुनै कुरामा टेन्सन हुँदैन र अरूको टेन्सन हटाउने उपाय पनि उनीहरूसँगै हुन्छ । यस्ता पुरुषहरू साहसी एवं हास्यचेतयुक्त हुन्छन् जुन कुराले महिलाहरूलाई असाध्यै लोभ्याउँछ ।
Boys, girls, women, पुरुष, बुद्धिमान् पुरुष, महिला
Prevचालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक गरिंदै
चीनको चमत्कारः चाइनिज् ‘फुडाअ’ स्काई वाक (तस्बिरमा)Next
परोपकारको आवरणमा व्यापार चलाउने संस्थालाई कारबाहीको माग
प्रअदेखि पियनसम्म महिला, हेड सरभन्दा दङ्ग परेर हेर्छन्
‘धरातल बिर्सिएर आलोचना गर्नु आफ्नै अनुहारमा हिलो छ्याप्नु हो’– महानायक हमाल (भिडियोसहित)